Pr Zafy : mpitari-tolona SAHY ! – MyDago.com aime Madagascar
Pr Zafy : mpitari-tolona SAHY !
Tsy mihemotra fa sahy nijoro hatrany ny filoha Zafy Albert tamin’ireo daroka baomba mandatsa-dranomaso io tolakandro io na dia efa zokiolona mihoatra ny valopolo taona aza ny lehilahy.Nanome lesona ireo mpitari-tolona ny « prof » androany.Tsy mihemotra na inona hidona na inona hiantra…
Rodoben’ny Malagasy ho an’ny Tanindrazana andro faharoa : « Ny baomba no niteny sy nireseka » fa ny vahoaka naparitaka sy tsy avela haneho hevitra.Toy izao no tranga hita teny an-toerana :
Rehefa vory lanona teo Anosy , manoloana ny ministeran’ny Indostria sy toekarena, ny vahoaka marobe, notarihan’ny profesora Zafy Albert dia tapa-kevitra fa hizotra hanatitra ilay taratasy hoan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny CST, ministeran’ny Fitsarana ary ny Tvm sy Rnm.
Rehefa avy teo amin’ny Lapa Maitso dia niverina hamonjy ny Lapan’ny Fitsarana no norarafan’ny « herim-pamoretana »tifitra baomba lakrimozena ny vahoaka.Nilefa daholo noho ny herin’ity baomba ity, ny filoha Zafy Albert sy ireo mpiara-dia aminy vitsivitsy anefa dia tsy nitsoaka fa namonjy ny toerana niangana ihany ary dia niharitra ny setroka teo.
Sempotra sy nokopakopahana ihany izy kanefa hita sy tsapa fa sahy mijoro ary mandray andraikitra hatrany.
Tsy nisy sahy nikasi_tanana, na nisambotra ity raiamandreny ity fa dia nampijaliana tamin’ny setroka teo ihany…nony afaka fotoana vitsivitsy dia raikitra indray ny daroka baomba fanindroanay, sempotra ny filoha Zafy Albert ary dia tsy maintsy niala noho ny fahasalamana.Na izany aza dia nanome fotoana ny vahoaka indray izy rahampitso : »tsy maintsy miala Rajoelina » hoy ny nambarany.
5 pensées sur “Pr Zafy : mpitari-tolona SAHY !”
20 mai 2011 à 6 h 28 min
Misaotra anao indrindra profesora Zafy Albert!
F’inona moa, fa tsy avelan’ireo mipoitra eny an-dalam-be ry notables isany:
– Mamy Rakotoarivelo sy Fetison Andrianirina = TSY ZAKAN’NY NY ATI-DOHAN’ny saim-boton’ireto lohandohan’ny mpisorona ao @ HAT!
20 mai 2011 à 6 h 44 min
Avelao I Prof. Zafy Albert no miseho :MISY ANTONY daholo izany raha tena efa mpitolona ianao ry HoAiza.
RAha tsy eo aza izy roalahy lazainao ireo, tsy midika izany fa matory any antranony izy
Samy manao izay tandrifiny izy io, tsy hilaina laotra koa, raha izao no misy vaosambotra indray
Fa dia tena midera an’i Prof. ZAfy Albert ! ho ela velona !
Eto ihany isika :
Tsetsatsetsa tsy haritra no sady manararaotra :
– Na dia tsy teto an-toerana aza ny tena t@ 1991, dia faly be raha naheno fa nahavita nandavo an-dRatsiraka i Zafy! Azoko ê…
Efa tany amin’io aho ry Njara an! Ny havana no mbola misy tsy voalazako…
20 mai 2011 à 13 h 44 min
Aux journalistes de la « Gazette de la grande île »,
en l’occurrence FR sinon ceux qui ont griffonné en page 5,
voici une info – à vous qui êtes à court d’idées plausibles, et qui vaut bcp mieux que ce vous venez de gribouiller aujourd’hui:
[Les militaires ne veulent pas arrêter le Pr Zafy Albert malgré les ordres émanant d’en haut.]
Réfléxiums a tout à fait raison concernant ce journal papier dans son dernier article…
Précédent Article précédent : Des mesonges aux séductions !
Suivant Article suivant : VIDEOS, matahotra demokrasia ny FAT !